दुइ साताका लागि अमेरिकाबाट घर आएका धरान विजयपुरका सन्तोष पोखरेल साथी यात्रा थुलुङलाई भेट्न गएका थिए । त्यो दिन थुलुङ रामधुनीको सालवनी जाने तयारीमा भेटिए । 'उसले जटायु रेस्टुरेन्ट हिडेको भन्यो, म त कुन नयाँ खुलेछ', उनले सुनाए, 'कस्तो परिकार पाउने हो जाउँ कि भनेको मान्छे होइन गिद्धलाई मासू ख्वाउने ठाउँ पो रहेछ ।'
सात वर्षयता खुल्दै र चल्दै रहेका यस्ता गिद्ध आहार केन्द्रका कुरा नेपाली सञ्चारमाध्यममा पटक-पटक आएका छन् । घुमेका, सुनेका र पढेकाहरू बढेपछि 'जटायु रेस्टुरेन्ट' को नामबाट अब पोखरेल जसरी अचम्ममा पर्नु पर्दैन । सिनो खाएर वातावरण सफा पार्न सघाउने गिद्ध हेर्दा सुन्दर चरा भनिहाल्न मिल्दैन । तर, यी ठूला आकारका दक्षिण एशियाली मुलकमा निरन्तर संकटमा पर्न थालेपछि यसको कारण खोजी भयो ।
ठूलो संख्यामा मरेको पाइन थालेपछि अनुसन्धानकर्ताहरू सक्रिय भए । पहिलो चरणको अनुसन्धान यसको विनाशको कारण वासस्थान संकट र आहाराको कमी हुनुपर्ने कारणलाई आधार मानेर गरियो । त्यो सफल भएन । त्यसपछि मरेका गिद्धलाई प्रयोगशालामा लगेर अध्ययन गर्दा त्यसका शरीरमा अत्यधिक मात्रामा युरिक एसिड भेटियो । मृगौला ड्यामेज भएको देखियो । यसको कारण खोजियो । निष्कर्श आयो - मारिनुको कारण डाइक्लोफेनेक ।
यो ट्याब्लेट र खोपमा आउने दर्द निवारक औषधि हो । प्रयोगमा मात्रा धेरथोर हुने भएपनि स्वास्थ्यकर्मीले यो मान्छे र पशु दुवैका लागि उपयोगी मान्छन् । अझ अधिकतर पशुको दर्द निवारक खोप यही थियो । वातावरणवादीले पत्तो पाए- यो ओखती चलाइए पछि मरेका पशुको सिनो खाएपछि गिद्धको पाचन प्रणाली बिग्रन्छ । उक्त औषधी चलाइएका पशु मरे, तिनको सिनो खाएपछि गिद्धका भित्री अंगहरू बिस्तारै सुनिन्छन् र भिसरल गाउनको समस्या भई मृगौलाले काम गर्न छाड्छन् । अनि यी प्रकृतिका कुचीकार भटाभट मर्छन् । भएको यही हो । डाइक्लोफेनेक नचलाउँ । बरु यसको ठाउँमा साइड-इफेन्ट नगर्ने मेलोक्सिकेम चलाए हुन्छ । २०६३ मा सरकारले कुरो मानिदियो ।
ओखतीका कुरामा परिवर्तनको माग मानिएपनि घटेका गिद्धको संरक्षणका लागि नौलो कार्यक्रमको खोजी वातावरणवादीले गरिरहेका थिए । चराविद डा. हेमसागर वरालले भने 'त्यही खोजी जटायु रेस्टुरेन्ट हो । गिद्ध जोगाउने योभन्दा कारगर उपाय अरू देखिएन ।' सन् २००७ देखि मुलकका विभिन्न भुभागमा चराविदले सम्भावनाको खोजी गरे । नेपाल पंछी संरक्षण संघका अनुसार मुलुकका २१ जिल्लाका ३९ हजार १ सय २२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रलाई डाइक्लोफेनेकमुक्त मानेर संरक्षणका कार्यक्रम ल्याउने कसरत सुरु भयो । यस्ता ठाउँ खोजियो, जहाँ गिद्ध आहाराको खोजीमा सजिलै आउँछन् ।
'एउटा गोठ हुन्छ, जसमा बुढा चौपाया पालिन्छ, मर्छन् अनि गिद्ध आउने ठाउँमा राखिन्छ', हिमाली प्रकृतिका निर्देशक प्रा. करणबहादुर शाहले भने, 'यति मात्रै थाल्दा पनि रिजल्ट राम्रो छ । स्थानीयले व्यवस्थापन जिम्मा लिएका कारण गिद्ध अब लोप नहोलान् भन्ने निष्कर्श छ । तर, खोजी अझै गर्नुपर्छ ।' उनका अनुसार नेपालमा पाइने गिद्धका प्रजाति, वासस्थान र उनीहरूको संरक्षणमा गर्न सकिने कामका लागि अहिलेको प्रयास थालनी मात्रै हो भन्न सकिन्छ ।
विश्वमा २३ प्रजातिका गिद्ध पाइन्छन् । पंक्षी संरक्षण संघका अनुसार दक्षिण एशियाली मुलुकजस्तै नेपालमा नौ प्रजातिका पाइएको रेकर्ड छ । डंगर, हिमाली, खैरो, सानो खैरो, राजगिद्ध, सुनगिद्ध, गोब्रे, हाडफोर र लामो ठुँडे नेपालमा पाइएका प्रजाति हुन् । संघको सूचीअनुसार नेपालमा हिमाली गिद्धको संख्या १० हजारभन्दा कम, सानो खैरो ५० भन्दा कम र डंगर २ हजारभन्दा कम पाइएका छन् । यसैगरि सेतो गिद्ध १ हजारभन्दा कम, हार्डफोर ५ सयभन्दा कम, सुनगिद्ध ५ सय भन्दा कम, राजगिद्ध २ सय ५० भन्दा कम र लामो ठुँडे गिद्धको संख्या यकिन भइसकेको छैन । गिद्धले मान्छेलाई आक्रमण गर्दैन । ज्युँदा पशु सिकार गर्दैन । मरेका वा फालिएका सिनो खाइदिएर वातावरण सफा राख्ने चक्रमा योगदान गर्छ ।
गिद्ध नाशिनुका कारण वास्थान विनाश र आहारामा विषादि मै प्रमुख रहेको डा. वरालको भनाइ छ । 'अग्ला रूखमा गुँड लाउँछ, ती दिनदिनै मासिए', उनले भने, 'पशुको उपचारमा डाइक्लोफेनेक चल्छ । त्यो चलाएको पशुको सिनो खाए त्यतिकै मरे ।' उनका अनुसार गिद्ध मासिएको नेपालमै मात्र होइन । पाकिस्तान र भारतमा पनि त्यस्तै हो । उनले भने 'नेपालमा संरक्षणका लागि चलाइएको रेस्टुरेन्टको अवधारणा अब ती देशमा पनि सुरु भएको छ ।' यस्तो नगरी संरक्षणको विकल्प नभएको उनले बताए ।
रूपन्देहीस्थित गैडाताल सामुदायिक वनको जटायु रेस्टुरेन्टका संयोजक बाबुराम मल्लले भने 'सुरूमा हामीलाई कस्तो अनौठो कार्यक्रम हो जस्तो लागेको थियो । तर, अब अभ्यस्त भइसक्यौं । सिनो लगेर राखिदिने गर्न अप्ठेरो छैन ।' उनका अनुसार यहा“ मुलुकमा रेकर्ड नौमध्येका ६ प्रजातिका गिद्ध आउँछन् ।
'एक दिन खाए त्यसलाई तीन/चार दिन पुग्दो रहेछ', उनले भने, 'हामीकहाँ वरपर अहिले आफ्नै कालगतिले बाहेक विषदिले गिद्ध मरेको भेटिँदैन ।' समितिले राखेका गोठमा करीव ४० वटा गाइवस्तु छन् । बुढा जनावर किनेर-खोजेर ल्याइन्छ । त्यसलाई पालिन्छ । कालगतिले मरेपछि त्यसलाई गाडामा राखेर गिद्ध आउने खुला ठाउँमा पुर्‍याइन्छ । उनले भने 'हाम्रो वरपर त्यसले गुँड लाउने खालका रूख छैनन् । भए त यता गुँड भेटिन्थ्यो ।'
कैलालीको श्रीपुर मजगाउँ-७ खुटियास्थित समयजी सामुदायिक वनले गिद्ध रेस्टुरेन्ट चलाउन समिति बनाएर साढे ३ हेक्टर जमिन छुट्याएको छ । संयोजक मनबहादुर बमको अनुभवमा अब गिद्ध लोप हुँदैन । 'मान्छेले बुझे यो पनि वातावरणलाई चाहिने प्राणी हो भनेर', उनले भने, 'हामीकहाँ गिद्ध मात्रै होइन त्यसका गुँड हेर्छु भने त्यो पनि देखाउन सक्छौ ।' उनका अनुसार सामुदायिक वन क्षेत्रमा हाल ८२ वटा गुँड पत्ता लागेका छन् । 'रेस्टुरेन्ट सुरु गर्दा तीन वर्षअघि ३५ वटा गुँड थिए', उनले भने, '६ प्रजातिका देखिन्छन् । हिमाली र डंगर गिद्ध धेरै छन् ।'
डा. वरालका अनुसार रामायणको कथामा रावणले सीता हरण गर्दा जटायुले जोगाउन खोजेको प्रसङ्ग छ । त्यसलाई आधार मानेर गिद्धलाई जटायु भनिएको र सोहीअनुसार रेस्टुरेन्टको नामाकरण गरिएका हुन् । जाडो छल्न तराई झर्ने हिमाली गिद्धका प्रजाति गर्मि सुरुभएसँगै उकालो लाग्छन् । उनका अनुसार असोजमा गुँड लगाएर मंसिरमा फुल पार्ने यो चरोले फागुन लाग्दा बच्चा कोरल्छन् । समुदायमा आधारीत जटायु रेस्टुरेन्टले गिद्धका गतिविधि हेर्न आउनेबाट प्रवेश शुल्क लिने अभ्यास थालेका छन् । कैलालीका बलले भने 'टिकट काटेर हेर्न पाउनु पनि रमाइलो हो । धेर थेग्दैन तर, प्रवेश शुल्क तिरिदिने बानीले हामीलाई यो कार्यक्रम चलाउन केही केही सहयोग हुन्छ ।'
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 9:55 PM